तीन अध्यक्ष प्रणालीमा एनआरएनए • Nepal's Trusted Digital Newspaperतीन अध्यक्ष प्रणालीमा एनआरएनए • Nepal's Trusted Digital Newspaper
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा विधान विपरीत सामूहिक नेतृत्वमा जाने सहमति भएको छ। संघ फुट्नबाट जोगाउने नाममा डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रबिना थापा तीन जना अध्यक्ष बन्नुहुनेभएकाे छ । उहाँहरू तीनै जना अध्यक्षका आकांक्षी हुनुथ्याे।
उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव पनि एकभन्दा बढी बनाउने सहमति भएको छ। तर, विधानले बहुअध्यक्षको व्यवस्था गरेको छैन। संघको १०औं महाधिवेशन चैत १० र ११ गते काठमाडौंमा हुँदैछ। उक्त महाधिवेशनले विधान संशोधन गरे मात्रै सहमति अनुमोदन हुनेछ। संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले महाधिवेशनमा विधान पारित गराउने हिम्मत उम्मेदवारहरूले गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ।
‘हामी विधानअनुसार नै चल्ने हो’, अध्यक्ष पन्तले भन्नुभयाे, ‘महाधिवेशनलाई विधान बनाउने सर्वाधिकार भएकाले पारित भए तीन अध्यक्ष प्रणालीमा एनआरएनए जानेछ।’
संस्थाको एकता अक्षुण्ण राख्न तीन अध्यक्ष मोडेलमा जान तयार भएको आकांक्षीहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभएकाे छ । सहमतिका आधारमा १० औं महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएकाले सहमति गरिएको उहाँहरूले बताउनुभयाे। विषम परिस्थितिका कारण सामूहिक नेतृत्वमा जान तयार भएको डा. केसीले बताउनुभयाे। सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढ्ने र अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको उहाँले सुनाउनुभयाे।
अब पक्ष, विपक्ष नभनिकन विधान संशोधन गरी सामूहिक नेतृत्वमा जाने आचार्यले बताउनुभयाे। सहमति, सहकार्य नै एनआरएनएको हितमा रहेको रबिना थापाले बताउनुभयाे।
संघविरुद्धको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ। अदालतले बुधबारसम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आदेश जारी गरेको थियो। अध्यक्ष पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा मुद्दा फिर्ता लिइने बताउनुभयाे।
आकांक्षी तीनबीच सामूहिक नेतृत्वमा जाने सहमति भए पनि महाधिवेशनले विधान संशोधन नगरे समस्या पर्ने सरोकारवाला बताउँनुहुन्छ । ‘विधान पास गराउन हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं’,अध्यक्ष पन्तले भन्नुभयाे।‘